Mmetụta nke Mmetụta Nchegbu - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Resources Mmetụta Mmetụta Nchegbu uche
Echiche abụghị ndị anyị bụ. Ha na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe. Anyị nwere ike ịchịkwa ha; ha ekwesịghị ịchịkwa anyị. Ha na-abụkarị àgwà nke iche echiche mana anyị nwere ike ịgbanwe ha ma ọ bụrụ na ha anaghị ewetara anyị udo na afọ ojuju mgbe anyị matara ha. Echiche dị ike na ha na-agbanwe ụdị akwara ozi anyị na-emepụta n'ụbụrụ anyị ma nwee ike, ka oge na-aga, ikwughachi ya n'ụzọ zuru ezu, na-emetụta usoro ya. Iche echiche bụ ụzọ dị mma iji mee ka anyị mata ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị a na-amaghi ihe na otu ha si emetụta mmetụta na mmetụta anyị. Anyị nwere ike weghachite njikwa.
Ụlọ Akwụkwọ Ahụike Harvard ọmụmụ gosipụtara nsonaazụ ndị a ebe isiokwu ndị ahụ nọ na-eme ihe dị ka 27 nkeji oge ngosi uche kwa ụbọchị:
• Nyocha MRI gosipụtara ihe isi awọ (mkpụrụ ndụ nerve) na amygdala (nchegbu)
• Meekwuo isi awọ n'okwu hippocampus - ebe nchekwa na mmụta
• Nweta uru bara uru nke na-aga n'ihu n'ụbọchị
• Mpempe akwụkwọ kwuru na nrụgide
Gbalịa na-edekọ ntụrụndụ anyị n'efu
jiri anyị ememe ntụrụndụ miri emi iji nyere gị aka ịkwa ahụ ma gbanwee ụbụrụ gị. Site na mbenata mmepụta nke neurochemicals stress, ị na-ekwe ka ahụ gị gwọọ na uche gị iji ike maka nghọta na nghọta ọhụrụ.
Nke mbụ a dị n'okpuru 3 nkeji nkeji ma mee ka ị gaa n'ụsọ osimiri. Ọ na-eme ka obi dịkwuo mma.
Onye nke abụọ a ga-enyere gị aka ịhapụ nrụrụ aka n'ime ahụ gị. Ọ na-ewe ihe dịka minit 22.37 kama ọ ga - adị ka naanị 5.
Nke atọ a bụ ime ka uche gị dị jụụ n'egosighị ihe ịrịba ama ọ bụla nke mmegharị ahụ ka ị nwee ike ime ya na ụgbọ oloko ma ọ bụ mgbe ndị ọzọ nọ. Ọ na-ewe oge 18.13.
Nke anọ nke a bụ 16.15 nkeji nkeji ma were gị gaa njem igwe na igwe ojii. Ezigbo ezumike.
Ntụgharị uche ikpeazụ anyị gafere nanị 8 nkeji ma nyere gị aka ịhụ ihe ịchọrọ imezu ná ndụ gị.
Ọ kachasị mma ịme ihe omimi miri emi dị n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie. Hapụ ma ọ dịkarịa ala otu awa mgbe ha risịrị ma ọ bụ mee ya tupu nri ka usoro mgbaze ghara igbochi ntụrụndụ gị. Ọ na-akacha mma ime ya ka ọ nọdụ ala n'oche gị na ogologo ụkwụ gị ma ụfọdụ na-ahọrọ ime ya na-edina ala. Naanị ihe ize ndụ bụ na ị nwere ike ịda n'ụra. Ịchọrọ ịnọ na nche ka i wee nwee ike ịhapụ echiche ndị siri ike n'echiche. Ọ bụghị hypnosis, ị na-achịkwa.
Lee ụfọdụ ndị ọzọ uche echiche sitere na BBC.
<< TRF Na-akwalite Akụrụngwa Akwụkwọ ndị akwadoro >>